PDF | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေး ကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ် အစီရင် ခံစာပါ အကြံပြုချက် များကို ထုတ်ဝေ လိုက်ပါသည်။
ကြားဖြတ် အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက် များတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အခြေအနေ တိုးတက် လာစေရန် မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့် လတ်တလော အကောင် အထည်ဖော်နိုင်မည့် အဆင့်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အဆင့် အကြံပြုချက် များတွင် ရေရှည် အကြံပြုချက်များ ပိုမို ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးaက်ာမရှင်၏ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ by Ty on Scribd
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195652
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 17, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ PDF, ပြည်တွင်းသတင်း, မြန်မာစာအုပ်
PDF Annotator 5.0.0.507 portable
▼ dfiles.ru ▼ OR ▼ turbobit.net ▼ OR ▼ junocloud.me ▼
ကဏ္ဍ Editor, PDF, Portable
▼ usersfiles.com ▼ OR ▼ turbobit.net ▼ OR ▼ gboxes.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 24, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ PC-Software, PDF, Reader
Master PDF Editor 2.2.15 With Crack Full Version Size(15.2MB)
PDF ဖိုင်များကို Edit ပြုလုပ်ချင် သူများ အတွက် Master PDF Editor ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
PDF ဖိုင်များကို ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာများကို စိတ်ကြိုက် ဖြည့်စွတ် ရေး
မိမိ ကိန်ပြူတာ ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံများနှင့် အကြောင်း အရာ စာသားများကို PDF ဖိုင် တည်ဆောက်
XPS ဖိုင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ PDF ဖိုင် တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ Print to PDF ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊
Convert XPS to PDF ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း နှင့် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
▼ shared.com ▼
From : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Photoshop@AungKyawThu
ကဏ္ဍ Converter, Editor, PDF
PDFZilla PDF Compressor 3.0 DC 31.01.2015
PDFZilla PDF Compressor 3.0 DC 31.01.2015 | 2.45 MB
Home Page - http://www.pdfcompressor.net/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 01, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ compressor, PDF
Iceni Technology Infix PDF Editor Pro 6.35 | 56.89 MB
Home Page : http://www.iceni.com/
ကဏ္ဍ Editor, PDF
Windows 8 ကို လေ့လာခြင်း
ဒီနေ့တော့ စာအုပ် တွေချည်း တင်ပေး ဖြစ်တော့တယ် တောင်းဆို ထားကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ
အတွက်ရော့ အခြားသော ညီအကို တွေပါ အဆင်ပြေ သွားအောင်လို့ အသင့် ရှိနေတာလေး
ကို အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို သရ (ICT) ကရေးသား တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး
ပါ၊ ကျနော် Windows 8 ကို စတင် အသုံးပြု တုန်းက လက်ထဲကကို မချပဲ အားကိုး ခဲ့ရတဲ့ စာ
အထူးသဖြင့် စတင် လေ့လာ ခါစဘော်ဒါတွေ ကတော့ လုံးဝအကြို က်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်လေးဟာ Windows 8 ထည့်သွင်းနည်းမှ စ၍ လက်တွေ့ သုံးနိုင်ရန် ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြ
ထားတဲ့ စပါယ်ရှယ် စာအုပ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ အပြင် လုံးဝဆောင်ထား သင့်တဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ စာ
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ docs.google.com ▼
From : www.zunite.org
ကဏ္ဍ eBook, PDF, နည်းပညာစာအုပ်, မြန်မာစာအုပ်
Android Application ရေးသားခြင်း ဆိုင်ရာ အခြေခံ သဘော တရားများ စာအုပ်
ဒီ စာအုပ်လေး ရှိနေတာ ကြပါပြီ တင်လည်း တင်ပေး ဖူးတယ် ထင်ပါတယ်။
အခု ခေတ် စနစ် အရ Application ရေးနည်းတွေ ခေတ်စား လာတော့ သတိရ တုန်း အားလုံး
ဒီလို စာအုပ်ကောင်း တွေကို မိမိ အနား လုံးဝ ဆောင်ထား သင့်ပါတယ် အခြေံခံ သဘောတရား
ဆိုပေမယ့် တကယ့် Pro အဆင့် အတွက် အထောက် အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
အခမဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ရေးနည်း တင်နည်း စာအုပ်
ဒီနေ့လည်း စာအုပ်ကောင်းတွေ ကိုချည်း ရွေးတင်ပေး လိုက်ပါတယ်၊ အားလုံးလည်း ကြိုက်ကြမှာပါ
စာအုပ် နာမည်လေး မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘာဆို တာကို သဘောပေါက်မှာပါ၊
၀ါသနာရှိတဲ့ ညီအကိုများအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်လေးပါ။
အကြည်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် စာအုပ်လေး " ခလောက်နီ " Pdf (2.16MB)
ဒီတစ်ခါတော့ နည်းပညာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အပြောင်းလဲလေး တစ်ခုဖြစ် သွားအောင် အူတက်အောင်
ရီနေရတဲ့ အကြည်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက်လာခဲ့တဲ့ " ခလောက်နီ " ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်
အကြည်တော်ရဲ့ လက်ရာ ဆိုတော့လည်း ဇာတ်လမ်းလေး ကလည်းကောင်း ရီလည်း ရီနေရပါတယ်။
စာမျက်င်္နှာ ၇၆ မျက်နှာ ပါဝင် ပါတယ်။ အခု စာအုပ်လေး ကလည်း ကွန်ပြူတာနဲ့ရော ဖုန်းနဲ့ပါ နှစ်မျိုး
လုံး လွယ် ကူစွာ ဖတ်နိုင်မယ့် Pdf File ပါ ဖိုင်ဆိုဒ် ကလည်း 2.16MB လေးသာ ရှိတာမို့ လွယ်ကူစွာ
From : Pyae Phyo (MMiTD)
ကဏ္ဍ eBook, PDF, မြန်မာစာအုပ်, ဟာသ
PDFMate PDF Converter Professional 1.73 | 35.68 MB
• Convert PDF to Word/Text/EPUB/Image/HTML/SWF
• Specify any page or page range of PDF for conversion
• Change original PDF layout or page size with PDF2PDF function
• Easy to use; advanced settings; multi-languages supported
Home Page - http://www.pdfmate.com/
ကဏ္ဍ Converter, PDF
Debenu Quick PDF Library 11.13 | 83.57 MB
Here are some key features of “Quick PDF Library”:
· TrueType font support (including font embedding)
· Built-in barcode support
· Import and append to any existing PDF file
· Encryption and decryption (including 128-bit encryption)
· Advanced drawing, including circles and arcs
· Outline and hypertext functions
· Embedded image support
· Rotated text, multi-line paragraph text, word-wrapped paragraph text
· Save-to-stream and Load-from-stream support for web serving
· Page cloning technology
· PDF merging technology
· Form field support
· Advanced page extraction
· Page combining and imposition
Home page : http://www.debenu.com/products/development/debenu-pdf-library/
Able2Extract PDF Converter 9.0.5 | 50.55 MB
ကဏ္ဍ Converter, PC-Software, PDF
Wondershare PDFelement 4.0.0.3 | 42.30 MB
– Workspace (Upgraded!)
– Create PDFs (Upgraded!)
– Combine PDFs (Upgraded!)
– Annotate PDF (Upgraded!)
– PDF Forms (Upgraded!)
– PDF Security (Upgraded!)
– Export PDF (Upgraded!)
PDFill PDF Editor 11.0.4
PDFill PDF Editor 11.0.4 | 10.11 MB
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Wednesday, December 24, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Editor, Formatter, PDF